MyCoolClass | Funda nantoni na naphi na
Yiba nguMtyali mali
Ubhaliso lwaBafundi abatsha
Iqonga lokuFunda kwi-Intanethi
Isiboniso simahla sencwadi
Yintoni ofuna ukuyifunda namhlanje?
Ukuhamba kunye neNkcubeko
Yonwaba kwaye ufunde!
Eyenzelwe umntu ngamnye izifundo kunye neeklasi zokubandakanya iqela labantwana kuphela!
Fumana utitshala ogqibeleleyo ngezifundo zabucala ezenzelwe umntu ngamnye okanye izifundo ezinomdla zeqela ukuze zilungele iimfuno zomntwana wakho. Ootitshala bethu bayayiqonda indlela abantwana abafunda ngayo kunye nokubonelela ngezifundo zokuzibandakanya besebenzisa iipropu ezahlukeneyo, oonopopi, kunye nemidlalo.
Nokuba kukwakha izakhono zolwimi ezomeleleyo, ukufunda isixhobo,
okanye ukudala ubugcisa, iMyCoolClass iya kunceda umntwana wakho aphuhlise izakhono eziyimfuneko kwikamva eliyimpumelelo.
Ngaphandle nje kokuba kuhle, bonke ootitshala bethu banako professional abafundisi kunye Iingcali Ekufundiseni abantwana.
Thatha izifundo zabucala zokufunda nomntu ngamnye ezenzelwe ukukhulisa ukuzithemba kunye nokuphucula izakhono zolwimi. Ootitshala bethu banolwazi, amava kunye nezixhobo zokugcina umntwana wakho ezibandakanya esebenzisa imidlalo, iipropu, nokunye okuninzi.
Ngaba umntwana wakho uyabuthanda ubugcisa, umdaniso, umculo, isayensi, okanye ukufunda? Siyakuqinisekisa ukuba ungalifumana ikhondo elifanelekileyo. Jonga iiklasi zethu ezizodwa kwizihloko ezahlukeneyo kunye nezifundo, ufunda nabahlobo abatsha kwihlabathi liphela!
Ngokungafaniyo namanye amaqonga okufunda, bonke ootitshala bethu bebonke bangabanini bombutho iMyCoolClass.
Njengobambiswano lwabasebenzi, imodeli yethu yeshishini itsala ootitshala abafanelekileyo abavela kwihlabathi liphela abahlangabezana nemigangatho ephezulu.
IsiNgesi sivula iingcango nakwiimarike!
Masijongane nayo. IsiNgesi lulwimi lweshishini lwamanye amazwe.
Nokuba usebenzela inkampani yamanye amazwe, ufuna ukwahlula intengiso yakho,
okanye uhambe kwelinye ilizwe, ukuba sisithethi esiqinisekileyo sesiNgesi kukunika ithuba.
I-MyCoolClass inabaqeqeshi abafanelekileyo nabanamava
abavela kwihlabathi lonke abagxile kwiShishini lesiNgesi.
Bonke ootitshala baziingcali eziqinisekisiweyo kwaye banikezela ngezifundo ezizezakho
kunye nezifundo ezibandakanyayo eziqinisekisiweyo ukuphucula eyakho izakhono zokunxibelelana kwaye wakhe ukuzithemba.
Ngaba uyasebenza kumzi mveliso onjengokubuka iindwendwe okanye ukuthengisa kunye nentengiso kwaye kufuneka unxibelelane ngesiNgesi? Ootitshala bethu abanamava besiNgesi baya kukunceda ukhule kwindawo enokhuphiswano kwihlabathi liphela.
Ubungqina besiNgesi ubuchule luluncedo olomeleleyo kwaye ngamanye amaxesha luyafuneka kwiiyunivesithi kunye nabaqeshi. I-MyCoolClass ineetitshala ezijolise ekulungiseleleni i-IELTS, TOEFL, iimviwo zeCambridge, kunye nokunye.
Nokuba uya eBarcelona, ​​eParis, okanye eLos Angeles, ukufunda ulwimi lwasekhaya kuya kwenza ubomi bube lula. I-MyCoolClass ineetitshala ngaphezulu kweelwimi ezili-15 zokukunceda ukhulise izakhono ozifunayo ukuze uchume kwilizwe elitsha.
INCWADI A IDEMO ESIMAHLA NAMUHLA!
Sinootitshala abaninzi abaqeqeshiweyo onokuthi ukhethe kubo. Jonga iiprofayili kunye neevidiyo ukufumana utitshala ofanelekileyo.
Incwadi Yakho iklasi
Funda xa ufuna. Incwadi
usuku kunye nexesha lokulingana neshedyuli yakho.
Ngena ngokulula kwigumbi lokufundela kwaye uvumele i-adventure yakho yokufunda ukuba iqale!
I-100% yoTitshala abaQinisekisiweyo
I-MyCoolClass yamkela kuphela abafundisi abafanelekileyo abavela kwihlabathi lonke. Bonke ootitshala mabazalise inkqubo yokuqinisekiswa kwamanyathelo amane eqhutywa liqela lethu. Ootitshala kufuneka bavume ukutshekisha imvelaphi yolwaphulo-mthetho ngaphambi kokufundisa eqongeni. Siqinisekisa bonke ootitshala bethu bahlangabezana nemigangatho ephezulu.
IMyCoolClass ibonelela ngoqeqesho oluqhubekayo lophuhliso lobungcali ukunceda ootitshala bethu ukuba babe ngabona banokuphumelela.
© 2022 UMyCoolClass Co-operative Limited | Onke Amalungelo Agciniwe.
Njengale nto siyenzayo?
Joyina uluhlu lwethu lokuposa kwaye uhlale unolwazi ngeendaba zamva nje, iingcebiso zokufunda, kunye nentengiso ngamaxesha athile. Ungazikhupha nanini na. umthetho wabucala
Imeyli Ngenisa idilesi yemeyile yakho
Hayi enkosi, andinamdla!
Le webhusayithi isebenzisa ii-cookies
Sisebenzisa ii-cookies kwiwebhusayithi yethu ukukunika amava afanelekileyo ngokukhumbula izinto ozikhethayo kunye nokuphinda utyelelo. Ngokucofa u "Yamkela konke", uyavuma ukusetyenziswa kwazo zonke iicookies. Funda OkuninziIzicwangciso ze CookieYamkela konke
Icookie sisiqwengana sedatha (ifayile yokubhaliweyo) ethi iwebhusayithi - xa ityelelwe ngumsebenzisi- ibuza umkhangeli wakho ukuba ayigcine kwisixhobo sakho ukuze akhumbule ulwazi malunga nawe, njengolwimi olukhethayo okanye ulwazi lokungena. Ezo cookies zisethwe sithi kwaye zabizwa ii-cookies zephathi yokuqala. Siphinde sisebenzise ii-cookies zomntu wesithathu- ezicookies ezisuka kwisizinda esahlukileyo kunendawo oyivakashelayo- kwimizamo yethu yentengiso kunye nentengiso.
Sisebenzisa ii-cookies ngezizathu ezininzi
ukusebenzisa izinto ezibalulekileyo kwiwebhusayithi yeMyCoolClass,
Kuya kufuneka ufunde lo Mgaqo-nkqubo weKuki kunye neMigaqo kunye umthetho wabucala.
sp_landing 1 usuku I-sp_landing isetwa nguSpotify ukuphumeza umxholo we-audio ovela kwi-Spotify kwiwebhusayithi kwaye ubhalisa ulwazi malunga nokusebenzisana komsebenzisi okuhambelana nomxholo womsindo.
sp_t 1 kunyaka I-sp_t cookie isetwa nguSpotify ukuphumeza umxholo we-audio ovela kwi-Spotify kwiwebhusayithi kwaye ubhalisa ulwazi malunga nokusebenzisana komsebenzisi okuhambelana nomxholo wesandi.
_gat 1 iminithi Le khukhi ifakwe nguGoogle Universal Analytics ukuthintela inqanaba lesicelo kwaye ke ukunciphisa umda ekuqokeleleni idatha kwiindawo eziphezulu zezithuthi.
izixhobo ze-yt ezikude ze UYouTube umisela le cookie ukuba igcine iividiyo ezikhethwa ngumsebenzisi usebenzisa ividiyo elungisiweyo kaYouTube.
yt-kude-isixhobo-id ze UYouTube umisela le cookie ukuba igcine iividiyo ezikhethwa ngumsebenzisi usebenzisa ividiyo elungisiweyo kaYouTube.
Cookielawinfo-ibhokisi yokukhangela-esebenzayo 1 kunyaka Icookie isethwe yimvume yecookie ye-GDPR ukurekhoda imvume yomsebenzisi yeicookies ezikwicandelo "elisebenzayo".
Inqanaba lokungena ze Akukho nkcazo ekhoyo.